ל [Laʹmedh] 10 Haiwa Jehovha, munorambirei makamira kure?+ Munorambirei makavanda munguva dzokutambudzika?+ 2 Munhu akaipa anodzingirira anotambudzika achizvikudza;+ Vanobatwa nepfungwa dzavakafunga.+ 3 Nokuti munhu akaipa anozvirumbidza pamusoro pechido choudyire chomweya wake,+ Munhu anowana mubereko usina kukodzera+ anozvirumbidza;נ [Nun]Haaremekedzi Jehovha.+ 4 Munhu akaipa haatsvaki Mwari+ nokuda kwokuzvikudza kwake; Zvaanongofunga ndezvokuti: “Mwari haako.”+ 5 Nzira dzake dzinoramba dzichibudirira nguva dzose.+ Zvamakatonga zviri kumusoro kwaasingasvikiri;+ Vose vaya vanomuvenga, anovashora.+ 6 Anoti mumwoyo make: “Handizozununguswi;+ Handizovi mudambudziko kwezvizvarwa nezvizvarwa.”+ פ [Peʼ] 7 Muromo wake uzere nemhiko nounyengeri nokudzvinyirira.+ Zvinotambudza nezvinhu zvinokuvadza zviri pasi porurimi rwake.+ 8 Anogara akavandira mumisha; Achauraya munhu asina mhosva munzvimbo dzakavanda.+ע [ʽAʹyin]Maziso ake anotsvaka munhu anotambudzika.+ 9 Anoramba akavandira munzvimbo yakavanda seshumba iri munzvimbo yayo yokuvanda.+ Anoramba akavandira+ kuti abate munhu anotambudzika nechisimba. Anobata anotambudzika nechisimba paanovhara mambure ake.+ 10 Anotambudzika wacho anodzvinyirirwa, anokotama, Uye vazhinji vakasuruvara vanowira munzara dzakasimba dzomunhu akaipa.+ 11 Iye anoti mumwoyo make:+ “Mwari akanganwa.+ Avanza chiso chake.+ Haazombozvioni.”+ ק [Qohph] 12 Haiwa Jehovha, simukai.+ Haiwa Mwari, simudzai ruoko rwenyu.+ Regai kukanganwa vanotambudzika.+ 13 Nei munhu akaipa asingaremekedzi Mwari?+ Iye anoti mumwoyo make: “Hamuzoiti kuti ndizvidavirire.”+ ר [Rehsh] 14 Nokuti imi makaona zvinotambudza nenhamo. Munoramba makatarira, kuti muzviise muruoko rwenyu.+ Munhu anotambudzika,+ nherera, anozviisa kwamuri. Imi makava mubatsiri wake.+ ש [Shin] 15 Tyorai ruoko rwomunhu akaipa neakashata.+ Tsvakai zvakaipa zvake kusvikira musingachazviwani.+ 16 Jehovha ndiMambo nokusingagumi kunyange nokusingaperi.+ Marudzi akaparara munyika yake.+ ת [Taw] 17 Haiwa Jehovha, muchanzwa zvinodiwa nevanyoro.+ Muchagadzirira mwoyo yavo.+ Muchateerera nenzeve yenyu,+ 18 Kuti mutongere nherera nomunhu akadzvinyirirwa,+ Kuti munhuwo zvake wepanyika arege kuita kuti pave nokudederazve.+